Twin Seoul Stage Danho rechitanhatu se "akamuka" ndizvo
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Twin Seoul Stage Danho rechitanhatu se "akamuka" ndizvo
Tatarisana kuparadzana iri mudariro rechina chaicho [3500 Yen Free yokunyatsoongorora] kuti vafemberi pamusoro kuti nzira
mapatya mweya kwechikuva, zvakare nokudhiraivha panguva pachangu pakati wechishanu Danho uri kure, yaiva nguva yokuti ndehwokuti chisinga- zvokunamata kuwedzera yavo. Nguva kukanganwira vanhu ose kwete chete anokumhan'arira, nokudira Unconditional, kuchaitika resonance kwemweya.
kuburikidza acho, zvichava kukwanisa mberi kusvika wechitanhatu pachikuva, inova chinotevera pachikuva. Panguva iyi, kusiya zvachose kuzvikudza pachake kuti abatwa kusvikira zvino, tinogona kusimuka kuti yakakwirira padanho sezvo munhu.
kwete woga, funga pamusoro chii chingaitwa kuti munhu asina kukumbira kudzoka, uye gamuchirai chitarisiko changu chokwadi, muviri uye pfungwa kuuya azere simba kupinda nehope yomudzimu uchaona. Kana zvichibvira kuti mberi
kusvikira pachinhanho ichi, akapedza nguva kuparadzana, izvo vakatsungirira refu, unogona mberi kune mukunopera.
Danho ichi kuti rudo
? isiyo kana zvakazara vanogamuchira chisinga- kudirwa vose vanhu, kurasa zvose kuzvikudza pachake kuti yave kurimwa kubva ruzivo uye ruzivo kare, mweya ndiye mweya muka ticharamba nenzira. Zvadaro, haichawaniki zvinogoneka kufunga zvinhu zviri Mubereko kurasikirwa, zvinova ndizvo dira Unconditional kuvanhu vose.
kune, hapana chimiro, zvakadai sezvazvakaita kufunga zvakanaka vanhu mapatya mweya uye ambient. Nokuti vose zviitiko zvinoitika yavo, kugamuchirwa uye yava napo, uye kukanganwirwa, uye unogona kuva norudo.
Izvi, ndinonzwisisa kuti Mwari ndiye chiitiko vakauya ichaita kubvuma zvose.
? zvose kubvuma kwazvakarerekera ari
kubvuma zvose, uye saka achasiirwa chete kune mamiriro chabva Mwari, kuisa hwavo Haumbogumburi zvinhu Rusubete, ichagamuchirwa mune zvematongerwo enyika. It chinorwadza kuti vakanga vapukunyuka kusvikira ikozvino, chiso pamadziro kunyange pasina vasingatongi, iwe haichawaniki kutya kuti pachako pfungwa yaMwari uye zvakasikwa.
Ndicho chikonzero, kuti Unconditional kwete kutsvaka kudzoka achagona kupfura famba. Vanoda kuva kwazvakarerekera achava zvakakwana chinhu, kana unogona kumutsa pachako ikoko, uchazonakidzwa uchaendesa resonance ari mapatya mweya uri kure nokukurumidza. Apo
abudiswa kuzvikudza pachake kuuya
Danho iri kuva nyore, zvakanga zvakaoma kusvikira ikozvino kunyangarika, uchanzwa sezvinoita anogutsikana vasunungurwa aonekwe. Zvadaro, Waona kuti Zvibvisike zvuva pamusoro kusvikira zvino vakajaira zvakanaka. Ndiyo chisinga- iri yechokwadi pfungwa shoko pakunamata.
kuvandudza yavo, kana zvichibvira kuti kupa kune dzakapoteredza kuziva Unconditional, zvekare kuti mapatya mweya kumirira pakarepo imomo.